အင်္ဂလိပ်စကားပြော ချက်ခြင်းလက်ငင်းတိုးတက်စေဖို့ - Myanmar Network
Posted by Language Republic on May 12, 2015 at 11:13 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Communicative skills လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာစကားလက်တွေ့အသုံးချရတဲ့ အပိုင်းမှာအရေးအသားနဲ့ အပြောအဆို ၂ မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ၂ မျိုးထဲမှာ အရေးအသားဟာ အချိန်ယူပြီး ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ စကားပြောကတော့ spontaneous process ခေါ် လျှပ်တစ်ပြက် တုန့်ပြန်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုမိုခက်ခဲတယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ စကားလုံးတွေ ဘယ်လောက် ကျက်ထားကျက်ထား၊ စကားပြောနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သဒ္ဒါတွေ ဘယ်လောက် လေ့လာထားပါစေ၊ တစ်ကယ်တန်း ပြောဆိုရတဲ့အခါ ခေါင်းထဲကနေပြောစရာ စကားလုံးပျောက်သွားတာ၊ သဒ္ဒါအမှားတွေ၊ အလွဲတွေဖြစ်တာ ကြုံကြဖူးမှာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း မှန်ကန်ပြီး တိကျတဲ့ လေ့ကျင့်မှုမျိုးကို ပုံမှန်လုပ်သွားရင် ဒီအခက်အခဲတွေကို အောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
ဒီကနေ့တော့ business environment မှာ presentation လိုမျိုးနဲ့ အခြားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ မိမိရဲ့စကားပြောကို ဘယ်လို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ လျှင်မြန်ထိရောက်အောင် လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်လို့ ရသလဲဆိုတာဆွေးနွေးပါမယ်။
သင်က စကားပြောကောင်းသူ၊ သင့်မိခင်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကောင်း ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကိုလည်း ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားလို မွတ်နေအောင် ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်ပြောဆိုနိုင်စေရမယ် ဆိုတဲ့ မြင့်မားတဲ့သတ်မှတ်ချက် (ရည်မှန်းချက်) ထားမယ်ဆိုရင် လက်တွေ့ဆန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာကို စတင်လေ့လာစဉ်ကတည်းက အမှားလုပ်မိမှာ၊ ပြောမိမှာကို မကြောက်ကြဖို့ ဆရာတွေက မကြာခဏတိုက်တွန်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိရိသတ် တွေရှေ့မှာ စကားထွက်ပြောတဲ့အခါ သင်ပြောရမယ့် အကြောင်းအရာကို အင်္ဂလိပ်လို အမှားကင်းစင်ပြီး ကျွမ်းကျင်ချောမွေ့စွာပြောပြီး ပရိသတ်ရဲ့ သြဘာကို ခံယူချင်တဲ့ဆန္ဒကို နားလည်လို့ ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အခက်အခဲမျိုးကို ကျော်လွှားဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုကတော့ ကိုယ်စကားပြောတဲ့ နှုန်းကို လျှော့ချလိုက် တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိက ဖြေးဖြေးလေးနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောနေတာကို ဘယ်သူကမှ ထပြီး ကန့်ကွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာကျော် စကားပြောကောင်းသူတွေလည်း သူတို့ဆိုလိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ ပိရိသတ်ရင်ထဲ၊ ဦးခေါင်းထဲကို ရောက်ဖို့ ဒီနည်းနဲ့ဘဲ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ပြောမယ့်စကားလုံးတွေကိုလည်း သေချာစွာ ရွေးချယ်ထားတာလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ပိရိဿတ်တွေကိုလည်း လေးစားရာ ရောက်ပါတယ်။ သင်က သူတို့တွေအတွက် အကောင်းဆုံးရှင်းလင်းချက်ကို ဖေါ်ပြဖို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာ ပြသရာလည်းရောက်ပါတယ်။
သင့်ကို နားထောင်နေတဲ့ ပရိဿတ်က စိတ်မရှည်တော့ဘဲ၊ သင်ပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာအပေါ် အာရုံစူးစုိုက်မှု လျော့လာနေပြီလို့ ထင်မှတ်ပြီး ပြောစရာ မြန်မြန်ပြီးအောင် ခပ်သုတ်သုတ် အရှိန်တင်ပြီး မြန်မြန်ပြောဖို့ လုပ်တတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံး ပြောလိုတာကတော့ ပရိဿတ် စိ်တ်မရှည်တော့ဘူး ဆိုတာမျိုးက ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ။ တစ်ကယ်တန်းမှာ ပရိဿတ်က အလောတကြီးပြောသွားတာကိုထက် ဖြေးဖြေးလေး အချက်အလက်တွေနဲ့ ချပြပြောဆိုတာကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ စိတ်ကိုလျှော့ထားပါ။ စကားပြောနေတုန်းမိမိအတွက် စဉ်းစားဖို့ အချိန်ပေးဖို့လုပ်တဲ့အခါ၊ pause လို့ ခေါ်တဲ့ စကားစကို ဖြတ်ပြီး ခဏတာ ငြိမ်သက်နေလိုက်ပြီး ပရိဿတ်က ကိုယ်ပြောခဲ့တာကို digest လုပ်ကာ ခေါင်းထဲဝင်အောင် လုပ်ဖို့ အချိန်ပေးရင်း ကိုယ့်အတွက်လည်း ထပ်စဉ်းစားဖို့ အချိန်ရစေပါတယ်။ ဒီလို pause လုပ်ရတာ အစဉ်မပြေနိုင်ဘူးထင်ရင် စဉ်းစားချိန်ရအောင် စကားထဲမှာထည့်ပြောရတဲ့ fixed phrases တွေကို အလွတ်ကျက်မှတ် လေ့ကျင့်ထားပြီး ထည့်ပြောလို့ ရပါတယ်။
"Why is there so much violence on TV? That’sagood question. Let me think foramoment, I haven’t really thought about it before. Well, I suppose…"
တစ်ခါတစ်လေကျရင် အပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဥပမာထဲကလို မေးခွန်းကို ပြန်ရွတ်ပြီး စကားတစ်ခွန်း၊ နှစ်ခွန်းလောက် ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်ပြောတာကလည်း စဉ်းစားအချိန်ယူတာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သင်လည်း အဲ့ဒီလိုမျိုး လုပ်ကြည့်လိုက်ပါက ကိုယ်ပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာအပေါ်မှာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု တစ်ခုခုကို ရှာကြံပြောဆိုရတဲ့ ဒုက္ခလည်းကင်းဝေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Fixed phrases ဆိုတာတွေက ပုံသေတွဲသုံးရတဲ့ စကားလုံးတွေဖြစ်ပြီးအလွတ်ကျက်မှတ် လေ့ကျင့်ထားလို့ ရပါတယ်။ အဲ့ဒီစကားလုံးတွေဟာ verb pattern တွေ၊ idioms တွေ၊ collocations စကားစုတွေကို ပုံသေကားချပ် ပြောဆိုပုံတွေနဲ့ သုံးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါမှသာလျှင် စကားလုံးရဲ့အသုံး၊ အဓိပ္ပါယ်စတာတွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ အမှားအယွင်းမရှိ သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားလုံးတစ်လုံးကို အဓိပ္ပါယ်ရှာဖွေ ကျက်မှတ်တဲ့အခါ အဲ့ဒီစကားလုံးကို ဥပမာပေး သုံးပြထားတဲ့ စာကြောင်း ၂ ကြောင်း ၃ ကြောင်းလောက်ပါ တွဲပြီးကျက်မှတ်ရပါမယ်။ တစ်ခါတစ်လေလည်း ကိုယ်ကျက်မှတ်ထားတဲ့ စာကြောင်းကို ဘာမှ ထပ်ထည့်တာ၊ ဖြုတ်တာ တွေလုပ်စရာမလိုဘဲ တိုက်ရိုက်သုံးစွဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ လူအများစုကတော့ စကားလုံးတွေကို လေ့လာကျက်မှတ်တာတော့ လုပ်ပေမယ့် တစ်ကယ်တန်း စာကြောင်းထဲမှာ ထည့်သုံးဖို့ ဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိတာမျိုး အများကြီးရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာကြောင်းနဲ့ တွဲဖက် လေ့လာကျက်မှတ်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ ကိုယ်သုံးတဲ့စာကြောင်းနဲ့ စကားလုံးတွေဟာ သဒ္ဒါထားအသိုတွေ မှန်မှမှန်ရဲ့လား ဆိုတဲ့ ပူပင်သောကတွေ ရောက်စရာမလိုတော့တာပါဘဲ။ စိတ်အေးလက်အေးသုံးသွားရုံပါဘဲ။ အောက်က ဥပမာလေးကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
အထက်ပါနည်းလမ်းနဲ့ appreciate ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လေ့လာကျက်မှတ်ရတာ ပိုပြီး အသုံးမဝင်ပေဘူးလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားကို လေ့ကျင့်တဲ့အခါ စကားပြောပုံကိုဘဲ အာရုံထားပြီး ပြောဆိုလေ့ကျင့်နေတာမို့လို့ အကြားစွမ်းရည်ကို မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ စကားပြောဆိုတာဟာ နားကနေ ကြားရတဲ့ အသံထွက် (အမှန်) ကိုမှတ်သားပြီး ပြန်လည်တုပ( တူအောင်) ပြောဆိုရတာဖြစ်လို့ native speaker တွေ ပြောဆိုသံ၊ ပြောဆိုပုံတွေကို မဖြစ်မနေ နားထောင်လေ့ကျင့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ ကိုယ်ပြောဆိုပုံတွေဟာ သဒ္ဒါမှန်ကန်ရုံမျှမက၊ သဘာဝကျရဲ့လား၊ အဓိပ္ပယ်ရှိရဲ့လား ဆိုတာဆန်းစစ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မိမ်ိပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူများတွေ ပြောဆိုနေပုံကို (အထူးသဖြင့် native speaker တွေ) အမြဲတမ်းနားထောင်မှတ်သားပါ။ ဒါမှမဟုတ် English ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ ဒရာမာတွေ ကြည့်တာ၊ audio book ခေါ် စာအုပ်နဲ့ (စာအုပ်မဲ့) နားထောင်တာတွေ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက်တို့၊ အမေရိကန်စင်တာတို့မှာ အဲ့ဒါတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်မှာလည်း သတင်းတွေ၊ သီချင်းတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ၊ အသံဖိုင်တွေနဲ့ နားထောင်လေ့ကျင့်လို့ ရပါတယ်။ ဒါတွေက စကားပြောတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးအထောက်အကူတွေပါဘဲ။
ပြောဆိုဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့ communication ဆိုတာ တစ်လမ်းသွားမဟုတ်ဘဲ နှစ်လမ်းသွား two way ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိပြုရပါတယ်။ နားထောင်နေသူပရိဿတ်တွေရဲ့ အမြင်ကို မေးမြန်းဖို့ မေးခွန်းလေးတွေ မေးပေးရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဖူးဆိုရင် သူတို့ရဲ့ အမြင်ကို ကိုယ်က စိတ်မဝင်စားဘူး ဆိုတာမျိုး ဖြစ်စေသလို၊ ရိုင်းရာလည်းကျပါတယ်။ ပြီးတော့လည်းဘာမှ မေးတာမျိုးမရှိတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း တစ်ကိုယ်တော် ဟောပြောပွဲပုံစံပေါက်နေတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ကိုယ်ပြောစရာ ကုန်သွားတဲ့အခါ၊ မေးခွန်းမေးခြင်းဖြင့် ထပ်ပြောစရာအကြောင်းအရာတွေ ပေါ်လာစေပါတယ်။ နားထောင်သူတွေကလည်း ကိ်ုယ်ပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အမြင်၊ အကြံဥာဏ်တွေလည်း ထပ်ဖြည့်စွက် ပြောချင်နေမယ်ဆိုတာသတိရပါ။
ဒီမေးခွန်းတွေဟာ ပြောစရာစကားအမျှင် မပြတ်စေသလုိ အခြားသူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ အပေါ်မှာလည်း သင့်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဟာက သင့်ကို အချိ်န်ပိုရစေမှာဖြစ်ပြီး သင်လည်း စကားပြောရင်း ပျော်ရွှင်မှုကို ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းမေးမြန်းတယ် ဆိုတာကလည်းလွယ်ကူတဲ့ ပညာရပ်မဟုတ်တာမို့ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးတတ်အောင် အချိန်ပေးပြီး ကျကျနန လေ့လာ လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။
အစောပိုင်းက ပြောခဲ့သလိုပါဘဲ၊ ဘာသာစကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်သိထား၊ သင်ယူထားတာတွေ ဟာ passive knowledge ခေါ်တဲ့ လက်ခံရယူ သိုလှောင်ထားတဲ့ အသိဥာဏ် သက်သက်သာ ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအသိဥာဏ်ကို ပြန်အသုံးချတတ်ဖို့ရာ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကတော့ ပြန်လည်ထုတ်လုပ် produce အသုံးပြုတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအသိဥာဏ်ကို activate ခေါ်အသုံးပြုခြင်းအတွက် ဖြစ်လာဖို့ practice လေ့ကျင့်မှု များများလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာလျှင် မှန်ကန်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Practice အပြင် အခြားနည်းလမ်းလည်းမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီလို လေ့ကျင့်ရာမှာ တစ်ခုကတော့ ရေးသားပြီးလေ့ကျင့်တာမျိုးဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်အသုံးတွေကို ပြန်လှန် သုံးသပ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်လို့ စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ စကားပြော လေ့ကျင့်တာဖြစ်ပြီး အရေးအသားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ပိုပြီး spontaneous process တုန့်ပြန်မှုအပေါ် အခြေခံတာဖြစ်တာကြောင့် စကားပြောဖေါ်တွေ၊ ဆရာတွေနဲ့ လက်တွေ့အသံထွက် ပြောဆိုလေ့ကျင့်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာလုပ်ဆောင်ကြည့်ရင် သင့်ရဲ့ communication skills ဆက်သွယ်မှု အရည်အသွေး ချက်ခြင်းတိုးတက်လာမှာ မလွဲပါဘူး။
Myenglishteacher.eu မှ Melinda Makkos ရဲ့6Ways to Immediately Improve Your English Communication Skills and Make it Powerful Using the Simplest Tips ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Communicative skills လို့ချေါတဲ့ ဘာသာစကားလကျတှအေ့သုံးခရြတဲ့ အပိုငျးမှာအရေးအသားနဲ့ အပွောအဆို ၂ မြိုးပါဝငျပါတယျ။ အဲ့ဒီ ၂ မြိုးထဲမှာ အရေးအသားဟာ အခြိနျယူပွီး ပွငျဆငျထုတျလုပျနိုငျပမေဲ့ စကားပွောကတော့ spontaneous process ချေါ လြှပျတဈပွကျ တုနျ့ပွနျရတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ပိုမိုခကျခဲတယျလို့ ယူဆလို့ရပါတယျ။ စကားလုံးတှေ ဘယျလောကျ ကကျြထားကကျြထား၊ စကားပွောနဲ့ ဆိုငျတဲ့ သဒ်ဒါတှေ ဘယျလောကျ လလေ့ာထားပါစေ၊ တဈကယျတနျး ပွောဆိုရတဲ့အခါ ခေါငျးထဲကနပွေောစရာ စကားလုံးပြောကျသှားတာ၊ သဒ်ဒါအမှားတှေ၊ အလှဲတှဖွေဈတာ ကွုံကွဖူးမှာပါဘဲ။ ဒါပမေဲ့လညျး မှနျကနျပွီး တိကတြဲ့ လကေ့ငျြ့မှုမြိုးကို ပုံမှနျလုပျသှားရငျ ဒီအခကျအခဲတှကေို အောငျမွငျစှာကြျောလှားနိုငျပါတယျ။
ဒီကနတေ့ော့ business environment မှာ presentation လိုမြိုးနဲ့ အခွားလုပျငနျးဆိုငျရာ ဆှေးနှေးမှုတှေ ပွုလုပျတဲ့အခါ မိမိရဲ့စကားပွောကို ဘယျလို လှယျကူရိုးရှငျးစှာ လြှငျမွနျထိရောကျအောငျ လကေ့ငျြ့ပွငျဆငျလို့ ရသလဲဆိုတာဆှေးနှေးပါမယျ။
သငျက စကားပွောကောငျးသူ၊ သငျ့မိခငျဘာသာစကားကို ကြှမျးကငျြစှာပွောဆိုနိုငျသူတဈဦးဖွဈကောငျး ဖွဈမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ အင်ျဂလိပျစကားကိုလညျး ကိုယျ့မိခငျဘာသာစကားလို မှတျနအေောငျ ကြှမျးကငျြစှာ ကိုငျတှယျပွောဆိုနိုငျစရေမယျ ဆိုတဲ့ မွငျ့မားတဲ့သတျမှတျခကျြ (ရညျမှနျးခကျြ) ထားမယျဆိုရငျ လကျတှဆေ့နျမှာမဟုတျပါဘူး။ အင်ျဂလိပျစာကို စတငျလလေ့ာစဉျကတညျးက အမှားလုပျမိမှာ၊ ပွောမိမှာကို မကွောကျကွဖို့ ဆရာတှကေ မကွာခဏတိုကျတှနျးလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပိရိသတျ တှရှေမှေ့ာ စကားထှကျပွောတဲ့အခါ သငျပွောရမယျ့ အကွောငျးအရာကို အင်ျဂလိပျလို အမှားကငျးစငျပွီး ကြှမျးကငျြခြောမှစှေ့ာပွောပွီး ပရိသတျရဲ့ သွဘာကို ခံယူခငျြတဲ့ဆန်ဒကို နားလညျလို့ ရပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး အခကျအခဲမြိုးကို ကြျောလှားဖို့ နညျးလမျးကောငျးတဈခုကတော့ ကိုယျစကားပွောတဲ့ နှုနျးကို လြှော့ခလြိုကျ တာဘဲဖွဈပါတယျ။ မိမိက ဖွေးဖွေးလေးနဲ့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ပွောနတောကို ဘယျသူကမှ ထပွီး ကနျ့ကှကျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ကမ်ဘာကြျော စကားပွောကောငျးသူတှလေညျး သူတို့ဆိုလိုခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာ ပိရိသတျရငျထဲ၊ ဦးခေါငျးထဲကို ရောကျဖို့ဒီနညျးနဲ့ဘဲ ဖွေးဖွေးမှနျမှနျပွောလရှေိ့ပါတယျ။ ကိုယျပွောမယျ့စကားလုံးတှကေိုလညျး သခြောစှာ ရှေးခယျြထားတာလညျး အထောကျအကူဖွဈစပွေီး ပိရိဿတျတှကေိုလညျး လေးစားရာ ရောကျပါတယျ။ သငျက သူတို့တှအေတှကျ အကောငျးဆုံးရှငျးလငျးခကျြကို ဖျေါပွဖို့ ကွိုးပမျးအားထုတျနတေယျဆိုတာ ပွသရာလညျးရောကျပါတယျ။
သငျ့ကို နားထောငျနတေဲ့ ပရိဿတျက စိတျမရှညျတော့ဘဲ၊ သငျပွောနတေဲ့ အကွောငျးအရာအပျေါ အာရုံစူးစိုကျမှု လြော့လာနပွေီလို့ ထငျမှတျပွီး ပွောစရာ မွနျမွနျပွီးအောငျ ခပျသုတျသုတျ အရှိနျတငျပွီး မွနျမွနျပွောဖို့ လုပျတတျပါလိမျ့မယျ။ ပထမဆုံး ပွောလိုတာကတော့ ပရိဿတျ ဈိတျမရှညျတော့ဘူး ဆိုတာမြိုးက ဟုတျခငျြမှ ဟုတျမှာပါ။ တဈကယျတနျးမှာ ပရိဿတျက အလောတကွီးပွောသှားတာကိုထကျ ဖွေးဖွေးလေး အခကျြအလကျတှနေဲ့ ခပြွပွောဆိုတာကို ပိုမိုနှဈသကျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ စိတျကိုလြှော့ထားပါ။ စကားပွောနတေုနျးမိမိအတှကျ စဉျးစားဖို့ အခြိနျပေးဖို့လုပျတဲ့အခါ၊ pause လို့ ချေါတဲ့ စကားစကို ဖွတျပွီး ခဏတာ ငွိမျသကျနလေိုကျပွီး ပရိဿတျက ကိုယျပွောခဲ့တာကို digest လုပျကာ ခေါငျးထဲဝငျအောငျ လုပျဖို့ အခြိနျပေးရငျး ကိုယျ့အတှကျလညျး ထပျစဉျးစားဖို့ အခြိနျရစပေါတယျ။ ဒီလို pause လုပျရတာ အစဉျမပွနေိုငျဘူးထငျရငျ စဉျးစားခြိနျရအောငျ စကားထဲမှာထညျ့ပွောရတဲ့ fixed phrases တှကေို အလှတျကကျြမှတျ လကေ့ငျြ့ထားပွီး ထညျ့ပွောလို့ ရပါတယျ။
တဈခါတဈလကေရြငျ အပျေါမှာတှခေဲ့ရတဲ့ ဥပမာထဲကလို မေးခှနျးကို ပွနျရှတျပွီး စကားတဈခှနျး၊ နှဈခှနျးလောကျ ထပျပွီး ဖွညျ့စှကျပွောတာကလညျး စဉျးစားအခြိနျယူတာတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ သငျလညျး အဲ့ဒီလိုမြိုး လုပျကွညျ့လိုကျပါက ကိုယျပွောနတေဲ့ အကွောငျးအရာအပျေါမှာ ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျမှု တဈခုခုကို ရှာကွံပွောဆိုရတဲ့ ဒုက်ခလညျးကငျးဝေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
Fixed phrases ဆိုတာတှကေ ပုံသတှေဲသုံးရတဲ့ စကားလုံးတှဖွေဈပွီးအလှတျကကျြမှတျ လကေ့ငျြ့ထားလို့ ရပါတယျ။ အဲ့ဒီစကားလုံးတှဟော verb pattern တှေ၊ idioms တှေ၊ collocations စကားစုတှကေို ပုံသကေားခပျြ ပွောဆိုပုံတှနေဲ့ သုံးရတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါမှသာလြှငျ စကားလုံးရဲ့အသုံး၊ အဓိပ်ပါယျစတာတှကေို သူ့နရောနဲ့သူ အမှားအယှငျးမရှိ သုံးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စကားလုံးတဈလုံးကို အဓိပ်ပါယျရှာဖှေ ကကျြမှတျတဲ့အခါ အဲ့ဒီစကားလုံးကို ဥပမာပေး သုံးပွထားတဲ့ စာကွောငျး ၂ ကွောငျး ၃ ကွောငျးလောကျပါ တှဲပွီးကကျြမှတျရပါမယျ။ တဈခါတဈလလေညျး ကိုယျကကျြမှတျထားတဲ့ စာကွောငျးကို ဘာမှ ထပျထညျ့တာ၊ ဖွုတျတာ တှလေုပျစရာမလိုဘဲ တိုကျရိုကျသုံးစှဲနိုငျတဲ့ အခွအေနမြေိုးလညျးရှိတတျပါတယျ။ လူအမြားစုကတော့ စကားလုံးတှကေို လလေ့ာကကျြမှတျတာတော့ လုပျပမေယျ့ တဈကယျတနျး စာကွောငျးထဲမှာ ထညျ့သုံးဖို့ ဘယျလိုသုံးရမှနျးမသိတာမြိုး အမြားကွီးရှိတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စာကွောငျးနဲ့ တှဲဖကျ လလေ့ာကကျြမှတျတဲ့ အကြိုးကြေးဇူးကတော့ ကိုယျသုံးတဲ့စာကွောငျးနဲ့ စကားလုံးတှဟော သဒ်ဒါထားအသိုတှေ မှနျမှမှနျရဲ့လား ဆိုတဲ့ ပူပငျသောကတှေ ရောကျစရာမလိုတော့တာပါဘဲ။ စိတျအေးလကျအေးသုံးသှားရုံပါဘဲ။ အောကျက ဥပမာလေးကို ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
အထကျပါနညျးလမျးနဲ့ appreciate ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လလေ့ာကကျြမှတျရတာ ပိုပွီး အသုံးမဝငျပဘေူးလား။
ဟုတျပါတယျ။ အင်ျဂလိပျစကားကို လကေ့ငျြ့တဲ့အခါ စကားပွောပုံကိုဘဲ အာရုံထားပွီး ပွောဆိုလကေ့ငျြ့နတောမို့လို့ အကွားစှမျးရညျကို မလြေ့ော့နတေတျကွပါတယျ။ စကားပွောဆိုတာဟာ နားကနေ ကွားရတဲ့ အသံထှကျ (အမှနျ) ကိုမှတျသားပွီး ပွနျလညျတုပ( တူအောငျ) ပွောဆိုရတာဖွဈလို့ native speaker တှေ ပွောဆိုသံ၊ ပွောဆိုပုံတှကေို မဖွဈမနေ နားထောငျလကေ့ငျြ့ဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါမှ ကိုယျပွောဆိုပုံတှဟော သဒ်ဒါမှနျကနျရုံမြှမက၊ သဘာဝကရြဲ့လား၊ အဓိပ်ပယျရှိရဲ့လား ဆိုတာဆနျးစဈနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ မိမိပတျဝနျးကငျြမှာ သူမြားတှေ ပွောဆိုနပေုံကို (အထူးသဖွငျ့ native speaker တှေ) အမွဲတမျးနားထောငျမှတျသားပါ။ ဒါမှမဟုတျ English ရုပျမွငျသံကွားအစီအစဉျတှေ၊ ရုပျရှငျတှေ ဒရာမာတှေ ကွညျ့တာ၊ audio book ချေါ စာအုပျနဲ့ (စာအုပျမဲ့) နားထောငျတာတှေ လုပျလို့ ရပါတယျ။ ဗွိတိသြှကောငျစီစာကွညျ့တိုကျတို့၊ အမရေိကနျစငျတာတို့မှာ အဲ့ဒါတှေ ရနိုငျပါတယျ။ အငျတာနကျမှာလညျး သတငျးတှေ၊ သီခငျြးတှေ၊ ဗီဒီယိုတှေ၊ အသံဖိုငျတှနေဲ့ နားထောငျလကေ့ငျြ့လို့ ရပါတယျ။ ဒါတှကေ စကားပွောတဲ့အခါ အကောငျးဆုံးအထောကျအကူတှပေါဘဲ။
ပွောဆိုဆကျဆံရေးဆိုတဲ့ communication ဆိုတာ တဈလမျးသှားမဟုတျဘဲ နှဈလမျးသှား two way ဖွဈတယျဆိုတာ သတိပွုရပါတယျ။ နားထောငျနသေူပရိဿတျတှရေဲ့ အမွငျကို မေးမွနျးဖို့ မေးခှနျးလေးတှေ မေးပေးရပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုမလုပျဖူးဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ အမွငျကို ကိုယျက စိတျမဝငျစားဘူး ဆိုတာမြိုး ဖွဈစသေလို၊ ရိုငျးရာလညျးကပြါတယျ။ ပွီးတော့လညျးဘာမှ မေးတာမြိုးမရှိတော့ ကိုယျတဈယောကျတညျး တဈကိုယျတျော ဟောပွောပှဲပုံစံပေါကျနတေော့ စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးမှာမဟုတျတော့ပါဘူး။
ကိုယျပွောစရာ ကုနျသှားတဲ့အခါ၊ မေးခှနျးမေးခွငျးဖွငျ့ ထပျပွောစရာအကွောငျးအရာတှေ ပျေါလာစပေါတယျ။ နားထောငျသူတှကေလညျး ကိုယျပွောနတေဲ့ အကွောငျးအရာပျေါမှာသူတို့ရဲ့အမွငျ၊ အကွံဉာဏျတှလေညျး ထပျဖွညျ့စှကျ ပွောခငျြနမေယျဆိုတာသတိရပါ။
ဒီမေးခှနျးတှဟော ပွောစရာစကားအမြှငျ မပွတျစသေလို အခွားသူတှရေဲ့ ထငျမွငျခကျြတှေ အပျေါမှာလညျး သငျ့ရဲ့ စိတျဝငျစားမှုရှိတယျဆိုတာကို ပွသရာရောကျပါလိမျ့မယျ။ ဒီဟာက သငျ့ကို အခြိနျပိုရစမှောဖွဈပွီး သငျလညျး စကားပွောရငျး ပြျောရှငျမှုကို ရရှိလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ မေးခှနျးမေးမွနျးတယျ ဆိုတာကလညျးလှယျကူတဲ့ ပညာရပျမဟုတျတာမို့ မှနျမှနျကနျကနျ သုံးတတျအောငျ အခြိနျပေးပွီး ကကြနြန လလေ့ာ လကေ့ငျြ့ထားသငျ့ပါတယျ။
အစောပိုငျးက ပွောခဲ့သလိုပါဘဲ၊ ဘာသာစကားနဲ့ ပတျသကျလို့ သငျသိထား၊ သငျယူထားတာတှေ ဟာ passive knowledge ချေါတဲ့ လကျခံရယူ သိုလှောငျထားတဲ့ အသိဉာဏျ သကျသကျသာ ဖွဈပွီး အဲ့ဒီအသိဉာဏျကို ပွနျအသုံးခတြတျဖို့ရာ တဈခုတညျးသော နညျးလမျးကတော့ ပွနျလညျထုတျလုပျ produce အသုံးပွုတာဘဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအသိဉာဏျကို activate ချေါအသုံးပွုခွငျးအတှကျ ဖွဈလာဖို့ practice လကေ့ငျြ့မှု မြားမြားလုပျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါမှသာလြှငျ မှနျကနျတဲ့ အင်ျဂလိပျစာကို ကိုငျတှယျသုံးစှဲနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ Practice အပွငျ အခွားနညျးလမျးလညျးမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီလို လကေ့ငျြ့ရာမှာ တဈခုကတော့ ရေးသားပွီးလကေ့ငျြ့တာမြိုးဖွဈပွီး အင်ျဂလိပျအသုံးတှကေို ပွနျလှနျ သုံးသပျနိုငျတာမြိုးဖွဈလို့ စကားပွောတဲ့အခါမှာလညျးအသုံးဝငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခုကတော့ စကားပွော လကေ့ငျြ့တာဖွဈပွီး အရေးအသားနဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ ပိုပွီး spontaneous process တုနျ့ပွနျမှုအပျေါ အခွခေံတာဖွဈတာကွောငျ့ စကားပွောဖျေါတှေ၊ ဆရာတှနေဲ့ လကျတှအေ့သံထှကျ ပွောဆိုလကေ့ငျြ့တာအကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။
ဒီအခကျြတှကေိုလိုကျနာလုပျဆောငျကွညျ့ရငျ သငျ့ရဲ့ communication skills ဆကျသှယျမှု အရညျအသှေး ခကျြခွငျးတိုးတကျလာမှာ မလှဲပါဘူး။
Myenglishteacher.eu မှ Melinda Makkos ရဲ့6Ways to Immediately Improve Your English Communication Skills and Make it Powerful Using the Simplest Tips ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
140 members like this
Permalink Reply by Hinnwai Oo on April 5, 2016 at 4:40
Permalink Reply by Zar Chi Tun on May 5, 2016 at 14:56
Thanks. That's need for me
Permalink Reply by aungnaingthu on July 30, 2016 at 11:06
Permalink Reply by myinthlaing on August 19, 2016 at 16:48
Permalink Reply by si thu aung on September 2, 2016 at 14:40
Permalink Reply by Lane Lane on February 3, 2017 at 14:59